Web developement အကြောင်းလေ့လာခြင်း | MDN
vbnကိုယ်တိုင် website တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် web app တခုဖန်တီးချင်တယ်ဟုတ်။ ဒီနေရာကသင့်ကိုစောင့်နေပါတယ်။
web design နဲ့ development အတွက် သင်ယူစရာတွေများပပြားလှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်မပူပါနဲ့ ။ ကျွန်တော်တို့ သင့်ကို professional web developer တယောက်အဖြစ်ရပ်တည်နိုင်လာအောင် ကူညီလမ်းပြပေးမှာပါ။
ခ​င်​ဗျားနဲ့ ကျွန်တော်တို့တော့ ဆုံကြပြီ၊ ဘယ်အကြောင်းအရာကိုခ​င်ဗျားလေ့လာချင်ပါသလဲ။
ကျွန်တော် သင်ယူစ တစ်ယောက်ပါ "Getting started with the Web" ကြိုစိုပါတယ်။ web developement ရဲ့ အခြခံသိစရာအဖြာဖြာ ကို ထောက်ပ့ပေးထားတဲ့ ဆောင်းပါး အတွဲဆက်က သင့်ကို ကူညီပေးမှာပါ။
Amazing!တယ်ဟုတ်ပါလား၊ ဒါဆို ခင်​ဗျား အဆင့်မြင့် သင်ခန်းစာနဲ့ ၊လမ်းညွန်မှုတွေကို ​​လေ့လာဖို့ စိတ်ဝင်စစိတ် casားcယ်asားမe, you may be interested in exploring our advanced Guides and Tutorials. You should also consider contributing to the Learning Area. ;)ကျ်ျွကျ်ျ
Note: In the future, we're planning to publish more learning pathways, for example for experienced coders learning specific advanced techniques, native developers who are new to the Web, or people who want to learn design techniques.
Information security အခြေခံ
ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီ ထောက်ပံပါ
Change your language Select your preferred language မြန်မာဘာသာعربيБългарскиবাংলাCatalàDeutschΕλληνικάEnglish (US)EspañolفارسیsuomiFrançaisעבריתmagyarItaliano日本語Taqbaylit한국어MelayuNederlandsPolskiPortuguês (do Brasil)Português (Europeu)РусскийSvenskaไทยTürkçeУкраїнськаTiếng Việt中文 (简体)正體中文 (繁體)